Tag: ahịa nnweta ahịa | Martech Zone
Tag: ahịa nnweta na-eri
Wenezdee, Machị 9, 2016 Douglas Karr
E nwere ụfọdụ amamihe juru ebe niile na ọnụ ahịa ị nweta onye ahịa ọhụrụ nwere ike ịbụ ugboro anọ ruo ugboro asatọ ịkwụ ụgwọ otu. Ana m ekwu na amamihe na-emeri n'ihi na ahụrụ m na ọnụọgụgụ ahụ na-ekekọrịta mana ọ nweghị mgbe m ga-enweta ihe m ga-eso. Anaghị m enwe obi abụọ na idebe onye ahịa adịghị ọnụ maka ọgbakọ, mana enwere mwepu. Dịka ọmụmaatụ, na azụmaahịa ụlọ ọrụ, ịnwere ike ịzụ ahịa - onye ahịa
Mgbe mbụ m nyochara ihe ọmụma a, enwere m obi abụọ na enwere ọtụtụ ọnụọgụ na-efu… mana onye edemede doro anya na ha lekwasịrị anya na mgbasa ozi ahịa dijitalụ na ọ bụghị atụmatụ zuru ezu. Enwere usoro ndị ọzọ anyị na-enyocha n'ozuzu, dị ka ọnụọgụ nke isiokwu dị elu na ọkwa dị elu, mmekọrịta mmadụ na òkè nke olu… mana mkpọsa na-enwe mmalite mmalite ma kwụsị ya ọ bụghị metrik ọ bụla dị mkpa.